को हुन् जुवाको खालबाट पक्राउ... :: विद्या राजपुत :: Setopati
को हुन् जुवाको खालबाट पक्राउ पर्ने बद्री पंगेनी?
चर्चित लोक तथा दोहोरी गायक बद्री पंगेनी पाल्पा जिल्लाको रामपुरमा जन्मिएका हुन्। पाल्पाको रामपुरको श्री दराई ठाँटी माविबाट विस २०५५ सालमा एसएलसी दिएपछि काठमाडौं छिरेका पंगेनीले अहिलेसम्म दजौनौं गीत गाएका छन्।
गायक पंगेनी लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालका अध्यक्ष हुन्। उनी २०७३ असोज १२ गते अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका थिए।
काठमाडौं आएपछि पुकार दोहोरी साँझमा ६ वर्षसम्म काम गरेका पंगेनीले काम गर्दा गदै पहिलो लोक दोहोरी एल्वम ‘तानसेन खस्यौली’ सार्वजनिक गरेका थिए।
त्यसपछि क्रमश पिएन क्याम्पस, ब्युटि नं वान, ससुरालीमा एल्बम सार्वजनिक गरे। उनलाई सर्वाधिक चर्चामा पुर्याएको गीत ‘सुसुरालीमा’ एल्बमको ‘ख्याल ख्यालमै दिल बस्यो कान्छी सालीमा’ हो।
चौंथो एल्बम ‘ससुराली’मा गायिका सिन्धुमल्लसँग मिलेर गाएको गीतले उनलाई जनतामाझ लोकप्रिय बनायो।
छोटो समयमै लोक गायकको परिचय बनाउन सफल पंगेनीले इमेज, हिट्स, अन्नपुर्ण अवार्ड पाएका छन्। उनले राज्य जनसेवा श्री प्रबल चौंथो पनि प्राप्त गरेका छन्।
उनको श्रीमती र एक छोरी छन्।
सांगीतीक कार्यक्रमको लागि देश र विदेशमा निकै रुचाईने पंगेनीको पछिल्लो समय राजनीतिमा बढी झुकाव देखिएको थियो।
उनले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि एमाले समर्थनमा गीत नै गाएका थिए। दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालका अध्यक्ष भएपछि उनले लोक गीतमा देखिएको बिकृति हटाउन प्रयत्न गर्ने बताएका थिए। तर उनीमाथि यस बिषयमा कुनै कदम नचालेको र लोक संस्कृतिको संरक्षणमा ध्यान नदिएको आरोप पनि लाग्नदै आएको छ।
काठमाडौंको बाँसबारी क्षेत्रबाट जुवा खेलिरहेको अवस्थामा पंगेनी पक्राउ परेका छन्।
जुवा खेलिरहेका बेला गायक पंगेनीसहित ११ जना पक्राउ परेको महाराजगंज प्रहरीका डिएसपी गोबिन्द पुरीले सेतोपाटीलाई जानकारी दिएका छन्। तर पंगेनीले भने निरमाया रोदी क्लबक भाईहरु पक्राउ परे भनेर बुझ्न गएको बताउँदै आँफू पक्राउ नपरेको बताए।
प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन ४, २०७४, ०३:०७:४३
सर्ने मनस्थितिमा निश्चल-स्वस्तिमाको 'घामड शेरे'
साम्राज्ञीसँग अंकित, होलान् त हिट?
सौगातले छाडे 'राम राम', यसो भन्छन् निर्देशक
रानू मंडलको जीवनीमाथि सिनेमा बनाउने चर्चा
साम्राज्ञीका निर्देशकले सोधे- किन निमोठिएँ म?
सलमान खानले रानु मोन्डललाई दिए ८८ लाख पर्ने घर